Nhazi, nzacha, nkpado, ichikota, ịjụ ajụjụ, ndenye aha, ịhazi, ịhazi, ịkọwapụta, ịkparịta ụka n'networkntanet, na-eso, nchịkọta, mmasị, tweeting, ịchọ, ịkekọrịta, ibe edokọbara, igwu ala, ịsụ ngọngọ, ịhazi, ịkọwapụta, nsuso, ịkọwapụta… ọ bụ ezigbo ihe mgbu.
Google dị afọ iri abụọ ma bụrụ naanị otu search engine, naanị na-enye gị ogbi data edepụtara na isiokwu ndị dabara na ajụjụ gị. Ọ ga-amasị m onye wuru chọta engine esote… Ike gwụrụ m ịchọ, ọ bụghị? Olileanya, na ikpochi igwe nke teknụzụ olu ga - eme ka ihe ọhụrụ dị na mbara egwuregwu a - enweghị m ike ịkọ n’echiche na ndị na - eri ihe ga - enwe ezigbo ndidi na - agbanwe site na ọtụtụ nsonaazụ iji chọta nke ha na - achọ.
Lọ ọrụ dịka Firefox, Google, na Apple nwere ike ịnyere aka. Site na ndabara nkwanye mgbasa ozi nwere ike na nwụnye, ọ na-etinye ọrụ dị n'aka onye ọrụ. Dịka onye na-azụ ahịa, ọ nwere ike ịdị m ka ọ bụ ntakịrị ihe ka m chọọ ka ndị ahịa na azụmaahịa kwụsị ị toa m ntị. Mana ọ bụrụ na adịghị m mkpa ma na-akpasu iwe, nke ahụ bụ ihe ha kwesịrị ime. Ndị na-ere ahịa ka na-adịkarị na ndabara izipu ozi ahụ na onye ọ bụla wee kesaa ozi ahụ ma nụchaa ya.